Archive du 20200615
Andry Rajoelina “Voafehy ny aretina, miverina ny asa aman-draharaha…”
Iray no nindaosin’ny fahafatesana teto Antananarivo, ary sivy tany Toamasina avokoa. Raha nalaina ny antontan’isan’ny namoy ny ainy tamin’ny aretina hafa tamin’ny taon-dasa, ny janoary 2019 dia 312 ny namoy ny ainy,
Antoko Monima Nampionona ny vahoaka ao Burundais
Nandefa taratasy fampiononana ny governemantan’i Burundi sy ny vahoakan’i Burundi ihany koa ny antoko Politika Malagasy Monina izay tarihin’ny filohany, Monja Roindefo Zafitsimivalo, ny 11 jona teo.
Boriborintany fahatelo Nizara fanampiana ny Depiote Feno
Nitondra anjara biriky ho fanampiana ireo mponina ao amin’ny Boriborintany faha-3 iadidiany ny Depiote Feno Ralambomanana voafidy tamin’ny anaran’ny Antoko Tiako i Madagasikara ny sabotsy 13 jona lasa teo.
Fipoahana Transformateur lehibe Ho vita rahampitso ny asa any Andekaleka
Taorian’ny fipoahana sy firehetan’ ny Transformateur de Puissance du Groupe numéro 1 (G1) n’ny toby famokarana herinaratra ao Andekaleka ny sabotsy alina teo izay niteraka tsy fahatomombanana lehibe teo amin'ny tambazotra iraisan'Antananarivo sy Antsirabe dia nanapa-kevitra ny jirama fa handefa transformateur de reserve an’ny JIRAMA TAC
Andapa Miravaka loko volomboasary ny tanàna
Sainam-pirenena fotsy, mena, maitso, raha ny mahazatra hatramin’izay, miaraka amin’ny arendrina no andravahana ny tanàna rehefa akatoky ny fetim-pirenena toy izao sy ao anatin’ny fankalazana ny fetim-pirenena koa moa izany, mazava ho azy.
Vahaolana ho an’i Toamasina sy ny manodidina “Ajanony ny fanomezana vola! ”
Kianja rugby eny Imamba Soavimasoando Miverina hampiasain’ny klioba RCTS indray
Miverina hampiasain’ny klioba RCTS « Rugby Club Tanora Soavimasoandro » indray ny tany misy ny kianja rugby eny Imamba Soavimasoandro rehefa nitoerana olona ara-pitantanana hatramin’ny taona 2014 nisian’ny fividianan’olon-tsotra azy io.
Enga anie !
Ankoatry ny fahatarana fotoana indray, dia hita hoe mirafidrafitra sy voaomana tsara kosa aloha ny resaky ny filoham-pirenena omaly.
Manakambahiny Olona roa maty voafaokan’ny fiara
Nitrangana lozam-pifamoivoizana teny Manakambahiny ny sabotsy lasa teo tokony 08 ora alina.
Imbiki Herilaza “Tsy hanao andrana vaksiny any am-ponja izany isika”
Nisy ireo voafonja voamarina fa mitondra ny tsimokaretina Covid 19 ka nandraisana an-tanana ny fizahana. Hatreto dia betsaka ny fepetra noraisina mba tsy hidiran` ny aretina ao amin` ny voafonja: fitokana monina, hevoka faobe… Mandeha anefa ny resaka mandeha mahakasika ny voafonja fa hanaovana andrana mahakasika ny aretina covid-19.
Opération Smile Mitohy ny tohana ho an’ireo sima
Efa 3500 ireo sima sitrana tamin’ny Opération Smile teto Madagasikara. Tamin’ny Sabotsy lasa teo dia nisy sima 400 eo ho eo izay efa nahazo fandidiana sy miandry fandidiana no notolorana vary, menaka,
Fanarenana ny toekarena Hojerena manokana ireo mpandraharaha
Firenena tsara tantana ny tanjona ary hangarahara ny fitantanana ny volam-bahoaka hoy ny filoham-pirenena nandritra ny tatitra tamin’ny vahoaka Malagasy omaly.
Krizy eto Madagasikara Mihamafy ny fisondrotam-bidim-piainana
Efa ambony hatrany ny tahan’ny sondro-bidim-piainana nanomboka ny taona 2017 hatramin’ny faran’ny taona 2019. Mbola hita mihamafy hatrany izany amin’izao fisian’ny valan’aretina eto Madagaskara izao.
Mpitsabo nentim-paharazana “Misy ireo tsy tan-dalàna”
Anaty fahamehana ara-pahasalamana moa isika ankehitriny ka maro ny zava-miseho, hoy ny filohan’ny fikambanam-pirenen’ireo mpitsabo nentim-paharazana, Josephin Andriandrainarivo.
Fanafihana tsy tanteraka Telo lahy voasambotra teny amin’ny 67Ha
Lehilahy telo no voasambotra nandritra ny famotorana mahakasika ilay raharaha fanafihana tsy tanteraka saika nataona jiolahy tetsy amin’ny 67ha.
Fitsaboana tradisionela malagasy Manana fitaovana fanorana ireo tapaka lalan-dra
Betsaka ireo olona liana amin’ny fitsaboana nentim-paharazana eto amintsika. Ankoatra ireo olom-boafidy, mpitondra fivavahana….
Suzy, tovovavy manana fahasembanana In-droa nisy nanolana, bevohoka ny farany
Zazavavy sembana ara-batana sy ara-tsaina i Suzy. Moana izy ary tsy mahavita mikarakara ny tenany ihany koa hany ka ny Reniny no manao izany rehetra izany. Fony izy 15 taona no fantatra fa efa nisy nanolana ary efa nametraka fitoriana "contre X"
Tanànan’i Mahajanga Ny fanarian-jaza indray no naresaka
Ankoatra ny fiatrehana amin’ny ady amin’ny tsimokaretina covid-19 sy ny fitandremana tsy ho voan’ny “dengue”
Mpanao asa tanana Malagasy Anaty krizy tanteraka
Ankoatr’ireo olana maro efa taloha tokony hovahana mahakasika ny asa tanana Malagasy dia mbola manampy trotraka ny voka-dratsin’ny krizy ara-pahasalamana ankehitriny.
Toamasina Voafonja 41 tratry ny coronavirus
Voafonja 41 amin’ireo 179 natoka-monina ao amin’ny fonjan’i Toamasina no fantatra amin’izao fa mitondra ny tsimokaretina Covid-19 raha ny fanazavana avy amin’ny Tale jeneraly misahana ny fandrindrana ny fonja Atoa Ranaivo Tovonjanahary omaly.
Fitsaboana ny Coronavirus Ho avy indray ny “Gellule CVO” atsy ho atsy
Olona 3 no nitondra ny tsimokaretina teto ny 20 martsa. Ity krizy ara-pahasalamana ity dia niteraka krizy hafa: ara-toekarena, ara-tsosialy… hoy ny Filoha Rajoelina omaly.
Tambavy CVO Mbola andrana aloha ny any Nigeria
Nilaza ny minisitry ny fahasalamana Nizerianina Osagie Eanire fa mbola ao anatin’ny andrana ny covid organics avy amin’i Madagasikara mba ahitana ny fahombiazany na tsia.
Coronavirus tao anatin’ny 48 ora Tranga 18 Antananarivo, 22 Toamasina,…
Miisa 42 ireo olona vaovao voamarina fa tratry ny coronavirus tao anatin’ny 48 ora farany, ka 22 ny sabotsy teo, ary 20 omaly alahady, araka ny tatitry ny Pr Vololontiana Hanta.